Boeing Max mbola tsy azo antoka, fantatry ny FAA ary ny sekreteran'ny fitaterana amerikana
Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Boeing Max mbola tsy azo antoka, fantatry ny FAA ary ny sekreteran'ny fitaterana amerikana
Ny fianjeran'ny Boeing MAX 737 roa dia tsy namono mpandeha fiaramanidina an-jatony tany amin'ny firenena mihoatra ny 35 fa nanimba ny lazan'ny Boeing, mpanao fiaramanidina lehibe indrindra manerantany.
Ho fanampin'izay, lalao hisorohana ny fahamarinana tsy nilalao an'i Boeing ihany fa ny FAA, masoivohon'ny governemanta amerikana voatendry hanao fanadihadiana. Androany dia nihaona tamin'ny sekretera amerikanina DOT Pete Buttigieg ireo niharam-boina tao amin'ny Ethiopian Airlines. Ny hafatra dia izao: mila mpitarika vaovao ny FAA ary tsy maintsy ampamoahina i Boeing.
Kitiho ny kapa ataonao ary mandehana mankany amin'ny kapa - any Karaiba
Air Seychelles hiasa sidina mivantana isan-kerinandro avy any Dubai